15 Zvino Jehovha akataurazve naMosesi, achiti: 2 “Taura nevanakomana vaIsraeri, uti kwavari, ‘Kana mazopinda munyika yenzvimbo dzenyu dzokugara, yandichakupai,+ 3 munofanira kupa Jehovha chinopiwa chinopiswa nomoto,+ chinopiwa chinopiswa+ kana chibayiro chokuita nacho mhiko chaiyo kana yokuzvidira+ kana mumitambo yenyu yomwaka nomwaka,+ kuti muitire Jehovha kunhuhwirira kwakanaka,+ kunobva pamombe kana makwai; 4 munhu anouya nechinopiwa chake anofanirawo kuuya kuna Jehovha nechinopiwa chezviyo chefurawa yakatsetseka,+ chegumi cheefa, chakakanyiwa nemafuta anokwana chikamu chimwe chete pazvikamu zvina zvehini. 5 Unofanira kupa waini kuti ive chinopiwa chinonwiwa,+ chikamu chimwe chete pazvikamu zvina zvehini, pamwe chete nechinopiwa chinopiswa kana chechibayiro chegwayana gono rimwe nerimwe. 6 Kana riri gondohwe, unofanira kupa chinopiwa chezviyo chezvegumi zviviri zvefurawa yakatsetseka, yakakanyiwa nemafuta anokwana chikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu zvehini. 7 Unofanira kuuya newaini kuti ive chinopiwa chinonwiwa, chikamu chimwe chete pazvikamu zvitatu zvehini, kuti ive kunhuhwirira kwakanaka kunoitirwa Jehovha. 8 “‘Asi kana ukapa mombe hono kuti ive chinopiwa chinopiswa+ kana chibayiro chokuita nacho mhiko chaiyo+ kana zvibayiro zvokugoverana nazvo kuna Jehovha,+ 9 munhu anofanira kuuyawo nemombe hono pamwe chete nechinopiwa chezviyo+ chezvegumi zvitatu zvefurawa yakatsetseka, yakakanyiwa nemafuta anokwana hafu yehini. 10 Unofanira kuuya newaini kuti ive chinopiwa chinonwiwa,+ hafu yehini, kuti ive chinopiwa chinopiswa nomoto, chokunhuhwirira kwakanaka kunoitirwa Jehovha. 11 Izvi ndizvo zvinofanira kuitirwa nzombe imwe neimwe kana gondohwe rimwe nerimwe kana chimwe chete pamakwayana makono kana pambudzi. 12 Zvisinei nokuwanda kwezvamungapa, izvozvo ndizvo zvamunofanira kuitira chimwe nechimwe maererano nokuwanda kwazvo. 13 Vanhu vose vomunyika yacho vanofanira kupa izvi saizvozvi pavanouya nechinopiwa chinopiswa nomoto, chokunhuhwirira kwakanaka kunoitirwa Jehovha.+ 14 “‘Kana pachizova nomutorwa achazogara nemi kana munhu anenge ari pakati penyu muzvizvarwa zvenyu zvose, uye achifanira kupa chinopiwa chinopiswa nomoto, chokunhuhwirira kwakanaka kunoitirwa Jehovha, sezvamunofanira kuita imi, ndizvo zvaanofanira kuitawo.+ 15 Imi veungano pamwe chete nomutorwa achange achigara imomo muchava nomurau mumwe chete.+ Uchava murau nokusingagumi muzvizvarwa zvenyu zvose. Mutorwa anofanira kuva akafanana nemi pamberi paJehovha.+ 16 Panofanira kuva nomutemo mumwe chete nomutongo mumwe chete kwamuri nokumutorwa ari kugara pamwe chete nemi.’”+ 17 Jehovha akataura naMosesi, achiti: 18 “Taura nevanakomana vaIsraeri, uti kwavari, ‘Kana mapinda munyika yandiri kukuendesai,+ 19 pamunodya chero zvokudya zvipi zvazvo zvenyika yacho,+ mupewo Jehovha mupiro. 20 Munofanira kupa mupiro woupfu husina kutsetseka hwezvibereko zvenyu zvokutanga+ kuti huve makeke akaita serin’i. Munofanira kuhupa sokupa kwamunoita mupiro unobva paburiro. 21 Munofanira kupa humwe upfu husina kutsetseka hwezvibereko zvenyu zvokutanga kuti huve mupiro kuna Jehovha muzvizvarwa zvenyu zvose. 22 “‘Zvino kana mukakanganisa, mukarega kuita mirayiro yose iyi,+ yakataurwa naJehovha kuna Mosesi, 23 zvose zvamakarayirwa naJehovha achishandisa Mosesi kubvira pazuva rakarayira Jehovha uye muzvizvarwa zvenyu zvose, 24 kana zvichinge zvakaitwa nokukanganisa, ungano isina kuzviona, ungano yose inofanira kubva yapa nzombe duku imwe chete kuti ive chinopiwa chinopiswa nokuda kwokunhuhwirira kwakanaka kunoitirwa Jehovha, pamwe chete nechinopiwa chayo chezviyo nechinopiwa chayo chinonwiwa maererano nezvinogara zvichiitwa,+ uye mbudzana imwe chete kuti ive chinopiwa chechivi.+ 25 Mupristi anofanira kuyananisira+ ungano yose yevanakomana vaIsraeri, vakanganwirwe; nokuti kwaiva kukanganisa,+ uye ivowo vakauya nechinopiwa chavo, chinopiwa chinopiswa nomoto kuna Jehovha nechinopiwa chavo chechivi pamberi paJehovha nokuda kwokukanganisa kwavo. 26 Ungano yose yevanakomana vaIsraeri nomutorwa ari kugara pakati pavo ngavakanganwirwe,+ nokuti kukanganisa kwakaitwa nevanhu vose. 27 “‘Zvino kana mweya chero upi zvawo ukatadza nokusaziva,+ munhu wacho ngaabve auya nenhunzvi yembudzi ine gore rimwe chete kuti ive chinopiwa chechivi.+ 28 Mupristi anofanira kuyananisira mweya wacho wakakanganisa pamberi paJehovha nokutadza usingaiti nemaune, kuti uyananisirwe, munhu wacho akanganwirwe.+ 29 Asi pamusoro pomunhu womunyika yacho ari pakati pevanakomana vaIsraeri, pamwe nomutorwa ari kugara pakati pavo, ngapave nomutemo mumwe chete kwamuri pamusoro pokuita chimwe chinhu musingaiti nemaune.+ 30 “‘Asi mweya unoita chinhu nemaune,+ munhu wacho angava munhu womunyika yacho kana mutorwa, achituka Jehovha,+ mweya iwoyo unofanira kuparadzwa pakati pevanhu vawo.+ 31 Nokuti munhu wacho azvidza shoko raJehovha+ uye atyora mutemo wake,+ chokwadi mweya iwoyo unofanira kuparadzwa.+ Kukanganisa kwomunhu wacho kuri paari.’”+ 32 Vanakomana vaIsraeri pavakanga vachiri kugara murenje, vakambowana mumwe murume achiunganidza huni pazuva resabata.+ 33 Vaya vakamuona achiunganidza huni vakabva vauya naye kuna Mosesi naAroni neungano yose. 34 Naizvozvo vakamusunga,+ nokuti zvaaifanira kuitirwa zvakanga zvisati zvataurwa zviri pachena. 35 Kwapera nguva yakati, Jehovha akati kuna Mosesi: “Chokwadi murume wacho anofanira kuurayiwa,+ ungano yose ichimutema nematombo kunze kwomusasa.”+ 36 Naizvozvo ungano yose yakamubudisa kunze kwomusasa, ikamutema nematombo akafa, sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha. 37 Zvino Jehovha akati kuna Mosesi: 38 “Taura nevanakomana vaIsraeri, uvaudze kuti vagadzire masa pamipendero yenguo dzavo muzvizvarwa zvavo zvose, vaise tambo yebhuruu pamusoro pomupendero une masa wenguo yacho,+ 39 ‘Unofanira kuva mupendero une masa kwamuri, munofanira kuuona moyeuka mirayiro yose+ yaJehovha, moiita, uye musatevera mwoyo yenyu nemaziso enyu,+ zvamuri kutevera muchiita unzenza.+ 40 Chinangwa chacho ndechokuti muyeuke, muite mirayiro yangu yose, muve vatsvene kuna Mwari wenyu.+ 41 Ndini Jehovha Mwari wenyu, akakubudisai munyika yeIjipiti kuti ndive Mwari wenyu.+ Ndini Jehovha Mwari wenyu.’”+